Ubuntu တိကျသော Pangolin Alpha1 ရရှိနိုင် | Linux မှ
သတ်မှတ်ထားသော Pangolin အလောင်းအစားသည် Canonical မှ နည်းနည်းလေးအနည်းနဲ့အများဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သုံးစွဲသူများအကြားမြေနေရာရဖို့ Linux Mint။ ဒါပါ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအနာဂတ် Desktop များတွင်သေချာသောအသံဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်း၊ GNU / Linux များလူအတော်များများကသူ့ကိုမကြိုက်ကြဘူး။ ဒီနေ့ပထမ alpha ၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသည့်အရာမရှိပါ။
အချိန်ကြာမြင့်စွာကြေညာခဲ့သည်အဖြစ် Rhythmbox ယခုကအစားထိုး Banshees။ ၏ယောက်ျားလေးများလျှင်ငါမသိရပါဘူး Ubuntu ကို သူတို့ကဘာမှမသိချင်ဘူး Mono အဘိဓါန်သို့မဟုတ်ပါကသူတို့ iso ၏အလေးချိန်ကိုပေါ့စေလိုသလား၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်သည့်အရာ၊ အထူးသဖြင့်ဤဗားရှင်းအရ၊ .iso ထက်သာ။ ကြီးမြတ်လိမ့်မည် 700 Mb ဖြစ်ပျက်သောအရာကိုသည် ဒီဗီဒီ.
သူတို့ကအစနောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်ပါဝင်သည် Betas များ de Firefox ကို y Thunderbird ကို, 5.1.2.1 စင်တာဆော့ဝဲ, Gwibber 3.3.1, Kernel ကို 3.2.0-2 နှင့်မူလက installation မှဖယ်ရှားပစ်ပါသည် Tomboy ပါ y မိုက်မဲသော, မျောက်ထည့်သွင်းရန်။ In OMGUbuntu အသေးစိတ်ကိုကြည့်ရန်
အခုတော့ငါတွေးမိနှင့်ဘယ်မှာ၏တိုးတက်လာရှိပါသလဲ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး? သွင်ပြင်အသစ်များအပါအဝင်ဤအပလီကေးရှင်းအားလုံးသည်မူလ desktop သည်လုံးဝမပွတ်ရသေးပါကအချည်းနှီးဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ စောလွန်းသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကိုသူတို့မလုပ်ခင်အရင်အာရုံထားသင့်တယ်။
သူတို့အလျှင် Ubuntu ကို အဆိုပါဘက်ထရီမကြာမီထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ Linux Mint အသုံးပြုသူအသစ်များအကြားသို့မဟုတ်သာယာသောအတွေ့အကြုံရလိုသူများအကြားမြှင့်တင်ရန်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ခေါ်ယူခြင်း GNU / Linux များ။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင် download ဆွဲ။ စမ်းကြည့်လိုပါကလင့်ခ်များဒီမှာပါ။
http://cdimage.ubuntu.com/releases/precise/alpha-1/ (Ubuntu Desktop နှင့် Server)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Ubuntu တိကျသော Pangolin Alpha1 ရနိုင်သည်
Ubuntu သုံးစွဲသူများကိုအငြိုးထားရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လက်ရှိဗားရှင်း၏အမှားများကိုမပြင်ဆင်နိုင်သေးပါ၊ နောက်လာမည့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်များလည်းရှိနေပါသေးသည်။
<° Ubuntu: D, ငါလာမယ့် alpha ဆောင်းပါး၊ နောက်လာမည့်ဆောင်းပါး၊ beta၊ RC နှင့်လွတ်မြောက်ရေးနေ့ကိုတွေ့နိုင်မည့်နေ့ရက်များကိုရေတွက်မည်ဟုငါပြောလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ့မလား။
ဒီအချိန်မှာ Ubuntu ဟာငါ့အတွက်ကောင်းပုံရတယ်။ Ubuntu ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Linux ထဲဝင်လို့ရပြီ။ ပထမဆုံးဗားရှင်းတွေကကျွန်တော့်ကိုပြproblemsနာဖြစ်စေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရာတွေကဗားရှင်းပြီးပြီးချင်းပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ သူသည်အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိခဲ့သော်လည်းနှစ်နှစ်အကြာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ ကျွန်တော်ရဲ့အရသာအတွက်အခုတော့ Banshee ဟုတ်တယ်၊ အခု Banshee မဟုတ်ဘူး၊ အခုတော့မျောက်ကဟုတ်တယ်၊ အခုတော့မျောက်မရှိဘူး။ စသည်တို့, etc ... .. သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ထူးခြားသောနေရာ၊ MacOS ၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်သဏ္likာန်တူခြင်း၊ အသိုင်းအဝိုင်းအပြင်ဘက်နှင့်အထူးသဖြင့် Gnome အပြင်ဘက်တွင် ပိုမို၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ ငါအရမ်းမကြိုက်ဘူး ငါ့အတွက် Ubuntu ကွယ်လွန်သွားပြီ၊ ငါမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုရင်အချိန်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Ubuntu ကို Linux နှင့်နီးနီးကပ်ကပ်ခွဲခြားသိနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် Ubuntu အတွက်အချို့သောပရိုဂရမ်များ (PPA နှင့်အခြားသူများ) အတွက်သာလျှင်စက်ရုံများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ကျန်သူများကိုပေးသောအခြားအရာများကြောင့် Ubuntu ကိုသူတို့သိရှိခြင်းကကျွန်ုပ်ကို ပို၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ သူ၏လုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်သူကလမ်းမှားပေါ်တွင်ရှိနေသည်ဟုထင်ရပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာကြီးအတွက်ဆိုးရွားမှုမရှိဟုသာကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ပထမဆုံးစဉ်းစားသည်မှာ၎င်းသည်“ စက်ခေါင်း” အဖြစ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်မိပါဘူး မင်းကိုသဘောတူတယ် - အနုပညာလက်ရာများမှတည်ငြိမ်မှုအထိဗားရှင်းများကိုသင်ပိုမိုဂရုစိုက်ရန်စတင်ပြီးအပြင်းအထန်လွင့်စင်မသွားသင့်ဟုအမြဲပြောခဲ့သည်။
Ubuntu မှာကြီးမားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ဘယ်စက်ပစ္စည်းမှာမဆို (mobile, tablet, etc) လည်ပတ်မှာပါ။ ဒီနှစ်များအတွင်း Linux ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအပြည့်အ ၀ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ …။
ငါအဲဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့မထင်ဘူး အကယ်၍ တပ်ဆင်ထားသောမိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းသည်လက်ရှိပြproblemsနာများဆက်လက်ရှိနေသေးလျှင်သင်ဘာမှမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ Android ဟာဒီရှေးဟောင်းပစ္စည်းမှာအငြင်းပွားဖွယ်ရာဘုရင်ဖြစ်လို့ Ubuntu ကဒီနေရာကိုခိုးယူလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။
အကယ်၍ လူတိုင်းသည် Classic gnome desktop ကိုမြှင့်တင်ပေးသောဖြန့်ဝေမှုများကချမှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လျှောက်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သင်မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရမည်၊ မရပ်တန့်ဘဲမနေနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အရင်းအမြစ်ပြproblemsနာများကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ထိုခြေလှမ်းကိုတက်ရန်တတ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟာမှားသင့်တယ်၊ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ၎င်းသည် Gnome2အသွင်အပြင်တူတူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ Desktop ရှိရိုးရှင်းသော၊ လက်တွေ့ကျသောနှင့် Gnome of yesteryear ကဲ့သို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအကြောင်းဖြစ်သည်။
မင်းထင်တာကိုမင်းကမင်းကိုဝေမျှမယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကအပိုတွေအားလုံးကမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကအရမ်းကိုဆိုးဝါးလွန်းတယ်၊
ဥပမာအားဖြင့် KDE သည်၎င်းသည်၎င်း၏အချိန်ထက်ကျော်လွန်သောရူပါရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်ဖော်ပြခဲ့သော semantic desktop နှင့်ယခုကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များတွင် KDE ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် haha, site ကိုမှ welcome ကြိုဆိုပါတယ်
သုံးစွဲသူများအတွက် coda တစ်ခုစီအတွက်မူကွဲများဖြစ်သည့် Desktop အတွက် Ubuntu နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် Ubuntu …ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားသောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည် guinea ဝက်အဖြစ်အသုံးမ။ ငါအဆုံး၌ဤသည် Canonical ၏စတီယာရင်ဘီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သော်လည်းဖြစ်ကောင်းနောက်ကျလိမ့်မည်
Ah, ဆောင်းပါးကို "ယေဘုယျ linux ယဉ်ကျေးမှု" အတွက်သာဖတ်သော်လည်းငါ့အတွက် Ubuntu သေပြီ ဗားရှင်း ၉.၄၀ နှင့်ကျွန်တော်သိပြီးဖြစ်သော“ လူသားများအတွက် Linux” မဟုတ်တော့ပါ။ ယခု၎င်းသည် "Linux သည် Shutlleworth ၏အချောင်အရံများ" ဖြစ်သည်။ ငါသည် Mint 9.04 နှင့်အတူရှိနေပြီး၎င်းသည် Fromlinux တွင်အဘယ်ကြောင့် ubuntu ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Linux တွင်ဖြန့်ချိမှုနှင့်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်များစွာရှိသည်။ Linux သည် Ubuntu သာလျှင် Windows အသုံးပြုသူများနှင့်တူလိမ့်မည်။ XP, Vista, Seven) သုံးခုသာ Ubuntu ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 12, 10.10 နှင့် 11.04 ။
Firefox တွင် UserAgent နှင့် Linux Mint 12 ကိုကြိုးစားကြိုးစားပါ။
Thunderbird 9.0 Beta3 ရရှိနိုင်